प्रदीप बस्नेत काठमाडाैं, ४ कात्तिक
अहिलेको संविधानले माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि अब स्थानीय तह आफैंले धेरै काम गर्न सक्नेछ । तर, शिक्षकको नियुक्तिलगायतका कुरा भने केन्द्रमै भएका कारण शिक्षक कसको हो भन्ने विवाद यतिखेर स्थानीय तहदेखि संघसम्मै देखिन थालेको छ । संघीयतापछिको शैक्षिक पद्धति र शिक्षक व्यवस्थापनका विषयमा शिलापत्रका लागि प्रदीप बस्नेतले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालासँग कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संघीयतामा शिक्षाको अभ्यास कस्तो हुँदै गएको छ ? हाम्रो सिकाइ पद्धति र यसको अभ्यास अहिले कसरी भइरहेको छ ?
संरचनागत रूपमा अन्योल छ । संघीय सरकारले ऐन, नियम र कानुन दिएन । परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार आँटिलो भएन र त्यसको असर स्थानीय सरकारमा पर्‍याे । नियमावली बनाएर मात्र काम गर्न खोज्दा ऐन खोई भन्ने भयो । नीति नभईकन ऐन नबन्ने स्थितिमा गएर स्थानीय सरकार फस्यो । संरचनामा अलमल हुँदाहुँदै स्थानीय सरकारमा आँट भएकाहरूले राम्रो काम पनि गरेका छन् ।
उनीहरूले सबै बालबालिकालाई यो पाँच वर्षमा विद्यालयमा ल्याउँछौं भनेर काम पनि गरिरहेका छन् । जुन अभिभावकले पढाउन सक्दैनौं भनेका छन्, त्यस्ता अभिभावकलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन् ।
शिक्षक र अभिभावकको बीचमा समन्वय गर्दै शिक्षकलाई अब हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर उत्साहित बनाएका छन् । शिक्षा व्यावहारिक र उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानकै परिकल्पना हो । यसलाई कार्यान्वयवनका लागि शिक्षकमा जिज्ञासा जगाइदिएको छ ।
प्रविधिको उपयोग गर्दै सिकाइलाई परिस्कृत बनाउने दृष्टिकोण शिक्षकमा विकास भएको छ । स्थानीय सरकारले पनि शिक्षक र सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यवहारवादी बनाउन खोजेको सकारात्मक पाटो पनि देखिएको छ । तर, अर्को पाटोमा शिक्षक कसको हो ? संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कसले हेर्ने हो ? भारतमा स्थानीय, प्रदेश र संघका बेग्लाबेग्लै शिक्षक छन् । हामीकहाँ शिक्षक कसको हो, यो कुरो अहिलेसम्म मैले बुझेको छैन । अहिले भएको शिक्षक स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न चाहँदैन ।
अहिलेको शिक्षकले प्रदेश सरकारले सरुवा, बढुवाको जिम्मा लिइदेओस् र पैसाको जिम्मा संघीय सरकारले हेरिदेओस् भन्ने चाहन्छ । शिक्षकको यो चाहनामा स्थानीय सरकार चुनौतीपूर्ण भए । संविधानले १२ कक्षासम्म स्थानीय तहले चलाऊ भनिसकेपछि शिक्षक नियुक्ति स्थानीय सरकारले नै गर्न पाउनुपर्छ भनेर अडान लिए । जुन ठीक पनि हो ।
विद्यार्थी, शिक्षकको अनुपात कति हो भनेर पनि यकिन गर्न नसक्ने र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने काममा स्थानीय सरकार फस्यो । शिक्षकको व्यवस्थापनमा लगानी स्थानीय, प्रदेश वा संघले कति गर्ने हो भनेर पनि उनीहरूले माग राख्न सकेनन् । परिणामतः स्थानीय सरकारले कक्षापिच्छे शिक्षक दिने काम सुरू गर्‍याे । राष्ट्रको आर्थिक हैसियतलाई हेर्दा कक्षापिच्छे शिक्षक दिन सकिने अवस्था छैन । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दिनुपर्ने र माथिल्लो कक्षामा विषयगत शिक्षक दिनुपर्ने अवस्थामा एउटै शिक्षकले दुई/चारवटा स्कुल धाउनुपर्ने चिन्ता हुन्छ ।
अहिले स्थानीय सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा गरिरहेको अभ्यास के हो ? कसरी काम गरिरहेका छन् ?
यसमा यही नै भन्ने छैन । जस्तो नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा विद्यार्थी संख्या थोरै रहेछ । तर, विद्यालय थप्नुपर्‍याे भन्ने माग आएछ । स्कुल थप्दा पैसा हाल्नुपर्ने, पैसा हाल्न खोज्दा संघीय सरकारले नदिन सक्छ, उठाएको पैसाले पुग्दैन, यस्तो समस्यामा उनीहरू फसेका रहेछन् । पछि मैले दुईवटा उपाय सुझाएँ ।
प्राइभेटको स्पेश कहाँनिर हो ? प्राइभेट राख्ने या फाल्ने के हो टुंगो लगाऊँ । तर, यिनीहरूले प्राइभेट बन्द गर्दैनन्
एउटा शिक्षक त्यहीँ पुर्‍याउने । अर्को गाडीमार्फत त्यहाँका बच्चालाई नजिकको विद्यालयमा पुर्‍याउने । उहाँहरूले टाढाटाढा रहेका विद्यार्थीलाई बसमार्फत विद्यालयमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनुभयो । निजी विद्यालयले स्कुल बस चलाउन सक्छन् भने सरकारीले किन नसक्ने ?
अर्को तरिका हुप्सेकोट गाउँपालिकाले घुम्ती शिक्षक राखेर पढाउन लगाएको छ । साथै, पालिकामा परम्परागत र प्रविधिका सीप भएका व्यक्तिहरूको सूची निर्माण गरेर विद्यालयले सीप सिकाइको काम पनि गर्न थालेको छ । यस्ता सकारात्मक काम पनि भएका छन् । ठाउँठाउँमा विद्यालय शिक्षकले नै बनाउने हो भनेर लागेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामातहतमा शिक्षक महासंघले परीक्षाका लागि के कसरी तयारी गर्ने र पालिकाका सबै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समान बनाउने भनेर काम गरिरहेको पाइयो ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा पनि यसरी नै काम भइरहेको मैले पाएँ । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा शिक्षकहरूले विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि पालिकासँग मिलेर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले शैक्षिक स्तर बढाउनका लागि स्मार्ट बोर्ड, प्रविधियुक्त सामग्रीमा लगानी गर्ने योजना बनाएर काम सुरू गरेकोे छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार कसको हो ? शिक्षकलाई कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ?
हाम्रो शिक्षकले संघीय तहबाट आफू छानिन खोज्यो । त्यही भएर शिक्षक सेवा आयोग बन्यो । र, यो सातै प्रदेशमा हुने भनेर संविधानमा व्यवस्था भयो । यसरी शिक्षकजति सबै केन्द्रका हुने भए । अब प्रश्न आयो, केन्द्रका शिक्षकलाई स्थानीयले चलाउन सक्छन् त ? प्रशासनिक उल्झन देखियो, यो उल्झनलाई मैले सुझाव दिने गरेको छु । निहुँ नखोजौं ।
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिभन्दा पढेलेखेका केन्द्रमा कति कर्मचारी होलान् ? के ती सबैले निहुँ खोज्ने त ? शिक्षा सुधारका लागि संघीय सरकारले आँट र रहर गरेन । म आफैंले धेरै पटक शिक्षामन्त्रीलाई सोधेको छु तर शिक्षामन्त्री आफैं निरीह हुनुहुँदोरहेछ । उहाँले मलाई उल्टै वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीबारे पढाएर पठाउनुभयो । जहाँ प्रधानमन्त्री नै सबथोक हुन्छ ।
स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिकाको समेत अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उसैलाई दिनुपर्ने होइन र ?
संविधानतः तपाईंले भनेकै कुुरा हो । तर, न्यायिक प्रक्रियाले मात्रै चल्छ ? अहिलेको अवस्था हेर्नुस् त । शिक्षकको तागत देख्नुभएको छ ? एउटा शिक्षक चलाउनुस् त स्थिति के हुन्छ ? हामीकहाँ स्वार्थ समूह बलियो छ । गर्न के सकिन्थ्यो भने पालिकाले प्रक्रिया बनाएर शिक्षक नियुक्त गर्ने तर तपाईंले नियुक्त गरेको शिक्षक कुनै एउटा पालिकाको मात्र भने हुनु हुँदैन । जस्तो न्युजिल्याण्डमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक नियुक्त गर्छ । तर, त्यो शिक्षक देशैभरिका लागि हुन्छ ।
अहिले तत्काल यी शिक्षकहरू संघीय सरकारका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले अर्कै शिक्षक बनाउँछ । तर, स्थानीय र संघीय सरकारले बनाएका शिक्षक बराबर हुन् भन्न सक्नुपर्छ । यो पनि एउटा उपाय हो । प्रदेशलाई शिक्षामा तपाईंको जिम्मेवारी के भनेर सोध्यो । उहाँहरू बालविकासको कुरा गर्नुहुन्छ । बालविकासको कुरा त पालिकाको हो । बालविकासका लागि पालिकालाई प्रदेशले कसरी सघाउन सक्छ ? यसका लागि ट्रस्ट बनाउन प्रदेशले सहयोग पो गर्ने हो कि ? एउटा पालिका र अर्को पालिकाको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर क्षमता बढाउने हो कि ? एउटा पालिका र अर्को पालिकाबीचको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै राम्रा पालिका निर्र्माणमा प्रदेशले सहजीकरण पो गर्ने हो कि ? यतातिर प्रदेशको ध्यान छैन ।
समस्या कहाँनिर हो उसो भए ? कर्मचारी नभएर समस्या हो या शिक्षकको अभाव हो ?
यो सबै देखाउने कुरा मात्र हो । पहिलो समस्या प्रधानमन्त्रीमा हो । हाम्रो प्रधानमन्त्री संघीयताको पक्षपाती हो कि होइन ? त्यो प्रष्टसँग भन्दिनुपर्‍याे । उहाँ संघीयताको पक्षधर होइन । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बागबजारमा भएको कार्यक्रममा तत्कालीन एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहलाई शिक्षामा विद्यार्थी संगठनहरूले सघाउनुपर्‍याे भन्दा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहले शिक्षा चलाउन सक्छ भन्दै खिसीट्युरी गर्नुभयो ।
उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि धादिङमा गएर स्थानीय तहलाई तिमीहरू त इकाइ हौ भन्दौ हप्कीदप्की गर्नुभयो । उहाँ त संविधानको बर्खिलापमा हुनुहुन्छ । शिक्षामन्त्रीले वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीमा केही गर्न सक्नु हुन्न । उहाँ त पानीको लौरोजस्तै हो । देख्न हुन्छ तर काम हुँदैन ।
दोस्रो समस्या भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघमा देखिन्छ । कम्तीमा उहाँहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आधारहरू आफैंले बनाउनुपर्छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायतका विषयमा नीति बनाएर काम गर्न उहाँहरूलाई कसले रोकेको छ ? तल आँट भएन, प्रदेश पंगु र संघ अलमलमा छ । शिक्षामन्त्रीले काठमाडौंबाट भन्छन् शिक्षक भर्ना नगर्नू, शिक्षक सरुवा नगर्नू । त्यसो भए गर्ने कसले त ?
सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिको कुरो पनि अलि विवादमै छ । एउटा तर्क विघटन गर्ने कि भन्ने पनि छ । विद्यालय व्यवस्थापन र प्रधानअध्यापकबीचको तालमेल कसरी हुन सक्छ ? व्यवस्थापन समितिले सक्रिय भएर काम गरेको थुप्रै ठाउँ छन् । प्रधानअध्यापक एक्लै सक्रिय भएर काम गरेको र राम्रो परिणाम निकालेको पनि देखेको छु ।
चन्दको पार्टीलाई मूर्दावाद भने पनि घनश्याम सरलाई गाली गर्न पाइन्छ ?
प्रधानअध्यापक अति नै कमजोर तर शिक्षकहरूले मात्रै राम्रो गरेको पनि कैयन् उदाहरण छन् । यसमा मेरो प्रष्ट कुरा गुणस्तरका लागि शिक्षक नै जिम्मेवार हो । मेरो वकालत नै शिक्षक हो । शिक्षक आफैंले धेरै गर्न सक्छ ।
व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिलाई दिऊँ । प्रधानअध्यापकले गुणस्तरका लागि काम गरोस् । शिक्षकलाई गुणस्तर सुधार्न के के गर्नुपर्छ र के के आवश्यक छ, त्यो जिम्मा प्रधानअध्यापकले लिइदेओस् । पालिकाले एउटा विद्यालय र अर्को विद्यालयका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि काम गरोस् ।
प्राइभेटको स्पेश कहाँनिर हो ? प्राइभेट राख्ने या फाल्ने के हो टुंगो लगाऊँ । तर, यिनीहरूले प्राइभेट बन्द गर्दैनन् । स्थानीय तहदेखि संघसम्मै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सालनाल जोडिएको छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म निजी विद्यालय सञ्चालकहरूबाट घेरिएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि व्यवस्थापन समितिले नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने, प्रधानअध्यापकले कार्यान्वयन गर्ने एउटा तर्क पनि छ नि ?
हाम्रोमा आइडोलोजिकल समस्या होइन । कांग्रेस वा अहिले भनिएका कम्युनिस्टका बीचमा म धेरै भिन्नता देख्दिनँ । हामीकहाँ कार्यान्वयन मुख्य समस्या हो । म व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुँ । साथसाथै म कुनै पार्टीको कार्यकर्ता पनि हुँ । कार्यकर्ता मात्रै होइन, निर्र्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छु । म त व्यवस्थापन समितिमा मात्रै बस्दो रहेनछु ।
प्रोफेसनल अपग्रेडका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने, उनीहरूलाई सीप सिकाउने जिम्मा शिक्षक संगठनलाई दिऊँ
राजनीतिक प्रभावका लागि राजनीतिमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने त विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ जस्तालाई हेरे पुग्छ । व्यवस्थापन समितिले यो गर्ने प्रधानअध्यापकले त्यो गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो होइन । यो पश्चिमाहरूको कुरा हो ।
निजीक्षेत्र महँगो भयो । अभिभावकले छोराछोरी पढाउनै नसक्ने भए । एकथरी भन्छन्– निजीक्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कसरी सुधार्ने ? कसरी राम्रा बनाउने हो ?
राम्रो शिक्षक भएपछि जुनसुकै पार्टीको भए पनि हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण छ । बिप्लव माओवादीलाई खुलेआम समर्थन गर्ने घनश्याम पाठकलाई हामीले सम्मान गर्‍याैं । सरकारले पुरस्कृत गर्‍याे । चन्दको पार्टीलाई मूर्दावाद भने पनि घनश्याम सरलाई गाली गर्न पाइन्छ ?
उहाँको समर्पणलाई सलाम गर्नुपर्छ । उहाँले चलाएको सामुदायिक विद्यालय हेर्न जानुस् । टिम स्प्रिट, डेडिकेशन कसरी सिक्ने एकपटक सबैले घनश्याम सरबाट सिके हुन्छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीबीचको समन्वय हेर्नुस्, रहरलाग्दो छ । यदि हामीले गतिलो शिक्षक राख्यौं वा भएको शिक्षकलाई गतिलो बनायौं भने सामुदायिक विद्यालय त्यसै उठ्छ । निजी विद्यालयमा रहरले मानिसले पढाइरहेका छैनन् ।
हामीले स्कुल तहको शिक्षकलाई बलियो बनाउन सकेनौं । आजभन्दा ५/७ वर्षअगाडि शिक्षकले चाहे भने गर्न सक्छन् भन्दा हामीलाई गाली गर्थे । शिक्षकको वर्गीकरण गरौं । वर्गीकरणका मापदण्ड बनाऔं । यसका लागि केही त्यस्ता सर्वव्यापी मानकहरू छन् । असक्षम शिक्षकलाई बिदाइ गरौं । केही पालिकाहरूले कम्प्युटर नजान्ने, आफूलाई अपग्रेड गर्न नसक्ने शिक्षकलाई बिदाइको तयारी गरेका छन् ।
किनभने बच्चा जान्ने भएर आए शिक्षकको तौरतरिका पुरानै छ । शिक्षकलाई पनि अपडेट गरौं । पालिका तहमा शिक्षक महासंघ बनेका छन् । उनीहरूले शिक्षकलाई तालीम दिऊन् । शिक्षकले ट्रेड युनियन, सोसल सर्भिस र प्रोफेसनल काम गर्नुपर्छ भनेर महासंघले टुंग्याएको छ । तर, मेरो भनाइ प्रोफेसनल काम पहिले गरौं भन्ने हो ।
उसो भए अबको शिक्षा र शिक्षक कस्तो हुनुपर्ने हो ? श्रमबजारको आवश्यकताअनुसारको सिकाइएको शिक्षा व्यावहारिक हो कि ? या पाठ्यक्रमलाई घोकाएर तयार पारिएको विद्यार्थी सफल भयो भने शिक्षक सफल हो कि ? अबको सिकाइ पद्धति र शिक्षक कस्तो हो ?
घोक्नु गलत हो भनेर दूरबुद्धि हालेको कसले हो, मलाई थाहा छैन । घोक्नु भनेको आफैं ठीक र बेठीक होइन । बुझ्न नजानेपछि मान्छेले घोक्ने नै हो ।
तर यसले वैकल्पिक सोच र आलोचनात्मक बनाउन सक्दैन भन्ने तर्क छ त ?
घोक्ने भनेको त वैकल्पिक उपाय न हो । हाम्रो जनशक्ति क्रिटिकल कहिले भयो र ? नेताले जे भन्यो हुबहु भन्ने अनुयायी क्रिटिकल हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ भन्छन् कांग्रेसका नेताहरू, उनीहरूका युवा विद्यार्थीहरूचाहिँ हो त्यही चाहिन्छ भन्छन् ।
के हो प्रजातान्त्रिक समाजवादी शिक्षा भनेको भनेर सोध्दा कांग्रेसका नेता सबै चुप । जनवादी शिक्षा प्रणाली भन्छन् कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ताहरू । के के हुन् यसका कार्यक्रम ? यसले कसरी काम गर्छ ? जनवादी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ ? कुन अवस्थामा यो प्रणाली सफल हुन्छ भनेर सोध्यो भने सबै मौन हुन्छन् ।
यो वर्गले क्रिटिकल कुुरा गर्न सुहाउँछ ? आलोचनात्मक चेत निर्माणका लागि संवाद चाहिन्छ । खोई हामीले कहाँ संवाद गरेका छौं ? कहाँकहाँ कुन स्तरका अन्तर्क्रिया गरेका छौं ? क्रिटिकल्ली इन्गेजमेन्ट भन्ने एउटा बहस छ । त्यो भनेको विद्यार्थी शिक्षकबीच हुन सक्छ । नेता कार्यकर्ताबीच हुन सक्छ । अभिभावक र छोराछोरीबीच पनि हुन सक्छ । त्यो हामी कहाँ छ ?
अब अन्त्यमा, सामुदायिक शिक्षा सुधारमा त काम गर्नैपर्ने छ । अब गर्नुपर्ने के होला ?
स्थानीय तहले संघीय ऐन कुरेर बस्ने होइन । संघीयतासँग विकेन्द्रीकरणसँगै आउने हो । स्थानीय तहले के के गरे भनेर एउटा संयन्त्र बनाऔं । शिक्षकले आफ्नो स्कुलमा पठनपाठनका लागि गरेका कामको विवरण, सीप सिकाइका तरिका, विद्यार्थी शिक्षकबीचको सम्बन्ध आदि जति पनि विद्यालयमा हुने गतिविधिको फेहरिस्त वेबसाइटमा राखौं ।
यसले प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरमै योगदान दिन्छ । अर्को उपाय शिक्षक महासंघमार्फत प्रोफेसन फस्ट भनेर जाऔं । प्रोफेसनल अपग्रेडका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने, उनीहरूलाई सीप सिकाउने जिम्मा शिक्षक संगठनलाई दिऊँ । यसैगरी, पालिकाहरूलाई परस्पर प्रतिस्पर्धी र सहयोगी बनाएर जाऔं । यो त संविधानको पनि परिकल्पना पनि हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ४, २०७६, १२:३०:००